‘प्रताप’ मा अनमोललाई अफर ! « Khabarhub
‘प्रताप’ मा अनमोललाई अफर !
अपिल विष्ट र अनमोल केसी
काठमाडौं – फिल्म ‘कागजपत्र’ का निर्देशक अपिल विष्टले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘प्रताप’ मा अनमोल केसीलाई अफर गरिएको छ । निर्देशक विष्टले अनमोललाई मुख्य भूमिकाका लागि अफर गरिएको खबरहबलाई बताए ।
फिल्मको स्किृप्टको पहिलो ड्राफ्टको फाइनल भइसकेको छ । निर्देशक विष्टले भूमिकाका लागि अनमोल केसी सकारात्मक देखिए पनि फिल्मको स्किृप्ट पढ्न चाहेको जानकारी दिए । ‘फिल्ममा अफर गरिएको हो, यो फिल्म बनिरहेको फिल्मभन्दा केही फरक पनि हुनेछ, अनमोललाई फरक भूमिकामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।’, निर्देशक विष्टले भने ।
फिल्ममा नायिका भने पहिले नै तय भइसकेको समेत विष्टले बताए । यद्यपि फिल्ममा को नायिकालाई अनुबन्ध गरिएको छ भन्नेबारे निर्देशकले अहिले नै खुलाउन चाहेनन् । यो फिल्मको काम ०७६ मा थालिने पनि निर्देशकले बताए ।
‘नायिका फिक्स भइसकेको हो, हामीले अहिले रिभिल गर्न खोजेका छैनौँ, अनमोलसँग चाहिँ कुरा भइरहेको छ ।’, विष्टले थपे ।
विष्ट निर्देशित फिल्म ‘कागजपत्र’ को यतिबेला चर्चा छ । फिल्ममा नाजिर हुसेन, भोलाराज सापकोटा, शिल्पा मास्के लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
यो फिल्म चैत्र ८ गतेदेखि नेपालभर रिलिज हुँदैछ ।
प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार १० : ०८ बजे